Sakano ny fampiharana sy ny fampandrenesana amin'ny findainao amin'ny AppBlock | Androidsis
Tambajotra sosialy, fampiharana hafatra na mpanjifa mailaka maro be no manao smartphone ho ivon-toerana fialamboly ary amin'izay dia variana ny iray rehefa mila mianatra na miasa. Izy ireo koa dia ahafahan'ireo olona maro mifatotra aminy nefa tsy afaka mandany fotoana kely nefa tsy mijery ny efijery na manodina azy hahita WhatsApp vaovao na resaka ao amin'ny Facebook. Izany dia nahatonga ny fampiharana vitsivitsy izay manampy ny mpampiasa hifantoka amin'ny maha-zava-dehibe ny fandraisana antso rehefa miasa isika na tsy mampiasa afa-tsy fampiharana fampiharana raha toa ka manao asa ho an'ny oniversite.
Ny iray amin'izany dia AppBlock ary mazava ny tanjony: tadiaviny mifantoha amin'izay zava-dehibe. Na dia ny zava-dehibe aza dia mety ny resaka amin'ny iray amin'ireo namanao, ny AppBlock dia hanakana ireo fampiharana sy fampandrenesana hahafahanao mifantoka amin'ireo olana tokony halaminao hamelana izany asa izany ao an-dakilasy ny ampitso. Izy io dia fampiharana ho an'ny hidin-trano. Fampiharana tonga tsy misy firoboroboana na dokam-barotra manitatra azy manerantany, fa ny fampiasa sy ny endri-javatra mety ho mora ampiasaina hanakanana ireo rindranasa sy fampandrenesana rehetra amin'ny maraina, mandra-pahatonganao fotoana malalaka kely hankafizana tsara kokoa ny findainao finday, farafaharatsiny amin'ny izany lafiny fialamboly izay mandany ny fiainantsika izany.
1 Mifehy ny fotoanao
2 Fampiharana ho an'ny fifehezana
Mifehy ny fotoanao
Ka amin'ny AppBlock dia hanana firewall tsara hifehy ireo fampiharana izay te-hamitaka anao ary mampiala voly ny tenanao mba hialanao amin'ireo ora fiasana na fianarana ireo. Ankoatry ny hoe hanidy ny lalana mankany amin'ny fampandrenesana sy ny rindranasa, ny AppBlock dia mamela anao hanakana mailaka ihany koa rehefa mikasika ny fialantsasatra vitsivitsy izy ireo.
Ary raha na inona na inona antony tokony hahafahanao miditra amin'ny rindranasa iray apetraka, fa tsy tianao hanelingelina anao ny fampandrenesanyManana ny safidy amin'izany koa ianao, koa AppBlock dia manolotra andian-dahatsoratra mahaliana mba hifehezana ny findainao. Mba hahafahana mitantana tsara kokoa ireo vanim-potoana isan'andro, azo atao ihany koa ny manana profil miaraka amin'ny fitsipika sasany ho an'ny vondrona fampiharana iray manokana.
Ny iray amin'ny antsipiriany hafa dia ny fahaizana miaro fampiharana miaraka amina kaody PIN, raha toa ianao ka tsy te hanana olona hanakorontana amin'ny rindrambaiko sasany, zavatra mety ho mora raisin'ny ray aman-dreny rehefa avelany ho an'ny zanany ny finday finday rehefa milalao lalao.
Fampiharana ho an'ny fifehezana
Ankoatra ny AppBlock, manana fampiharana isan-karazany tsara izahay izay tonga tato anatin'ny taona vitsivitsy izay manampy ny mpampiasa fantaro ny fiankinan-doha amin'ny findainao manao ahoana izany Instant. Ity dia rindranasa iray izay hampahafantatra anao hoe impiry mandany mijery ny finday finday avoakonao ianao mandritra ny andro mba hahafantaranao ilay farango mety anananao.
Offtime dia mitovy amin'ny iray ananantsika amin'ny AppBlock, satria hanampy antsika izany mametraha ora maromaro hany ka tsy ny smartphone no mifehy ny fiainantsika amin'ireo fampandrenesana rehetra, fampiharana sy serivisy isan-karazany azontsika idirana.
Ary raha mitady rindrambaiko mitovy amin'izany ianao dia manana ihany koa ClearLock, que dia hiandraikitra ny fanakanana ireo fampiharanaNa dia mety tsy manana ireo safidy na pitsopitsony ananantsika amin'ny AppBlock ireo aza izany. Andiana fampiharana izay manampy antsika hiezaka ny ho tompon'ny fotoanantsika, ny sitra-pontsika ary ny tanjontsika. Tsy hahagaga antsika ihany koa fa misy fotoana Google mandefa endri-javatra amin'ity lafiny ity, na dia ao Lollipop aza dia efa nampidirina ny fomba hanakatonana ny làlana mankany amin'ny fampandrenesana ankoatry ny endri-javatra sasany ahafahan'ny fampiharana sasany fa tsy ny hafa.
AppBlock tsy andoavam-bola avy amin'ny Play Store na dia misy fividianana fampiharana aza ianao. Fampiharana mahaliana sy ilaina hifehezana ny findainao fa tsy ny fampandrenesana manakana anao tsy hanana andro fiasana mahazatra. Tsy tokony hamoy ny asanao amin'ny findainao ...
AppBlock: Mijanona ho mifantoka, manakana ny Internet & ny Apps
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny AppBlock dia manampy anao hanakana ny fampiharana sasany rehefa mila mifantoka amin'ny asa ianao na miala sasatra
natahorchata dia hoy izy:
Ny lalao fikarohana teny mahazatra dia nahafinaritra tokoa!
Mamaly an'i natahorchata
Lara Croft GO dia mandeha mankany amin'ny Cave of Fire amin'ny fanitarana vaovao ary fihenan'ny 50% ny vidiny